Wareysi: Wasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya oo ka hadlay xiriirka Kenya
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u yeeratey safiirkeedii Kenya shaley iyadoo sidoo kalena u dirtey safiirka Kenya wadatashi.
Dowlada federaalka ayaa ku eedeysey dowlada Kenya in ay faragelin ku heyso arrimaha Soomaaliya iyo doorashada, ayada oo u adeegsaneysa, sida ay hadalka u dhigtay, madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe.
Dhinaca kalena, dawladda Kenya ayaa galabta soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegayso inaysan wax wargelin oo rasmi ah ka helin dawladda Soomaaliya, oo ku saabsan in safiirkeeda Lucas Tumbo uu ka baxo magaalada Muqdisho.
Kenya waxay ku sheegtay war-saxaafadeedka inay ka xuntahay go’aanka ay qaadatay dawladda Soomaaliya, ayna Kenya ay ixtiraamayso mabaadii’da caalamiga ah ee aaya-ka-tashiga ah, madaxbannaanida dhuleed iyo tan siyaasadeed ee waddan kasta gaar ahaan waddamada Afrika.
Falastiin Axmed Iiman ayaa haddaba wasiirka cusub ee Arrimaha dibada iyo xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ka wareysatey xiriirka Kenya iyo dagaallada Ethiopia, ugu horeyna waxa ay weydiisey sababta ay u eryeen safiirkii Kenya, kii Soomaaliyana ugu yeerteen.